Muva nje, umhlangano wokushintshana ngobuchwepheshe bokuguqulwa kobuchwepheshe bokulondolozwa kobuchwepheshe bezokulondolozwa kobuchwepheshe bendawo yokulondolozwa kwamandla evolontiya uvulwe ngokusemthethweni, umhlangano ubuphethwe yi-guangxi town water and drainage vice vice President Mai mai xinfa, unobhala jikelele wenhlangano u-zheng jiarong wenze inguquko ebalulekile yenkulumo nokongiwa kokonga amandla ukugqugquzela. AbakwaShanghai kaiquan bamenywa ukuthi babambe iqhaza kwezokushintshisana ngezobuchwepheshe, nakho okuqinise ukuqonda kukaKaiquan emnyangweni wamanzi.
U-Wang jian, iphini likaMongameli weqembu le-kaiquan, wethule isimo sokuthuthuka nokuhlelwa kwesikhathi esizayo nokuhlelwa kwe-kaiquan ezinkampanini zamanzi engqungqutheleni, futhi waphindaphinda ikakhulukazi izinsizakalo ezintathu zamahhala ezinikezwa yiqembu le-kaiquan ezinkampanini zamanzi.
1. Nikeza ngezixazululo zokonga ugesi ezinkampanini zamanzi mahhala
Ngokucwaninga nokuthuthukiswa kwamaphampu enuzi, i-kaiquan inqwabelene nesipiliyoni esicebile. Eminyakeni emithathu edlule, yenze ukuthuthukiswa nokuthuthukiswa kwamaphampu asetshenziswa ezitshalweni zamanzi. Ithuthukise ngempumelelo ipompo yokudonswa kabili enokwakheka kwamaphoyinti amaningi nobubanzi bendawo esebenza kahle kakhulu, isilinganiso sokugeleza sisuka ku-70% kuye ku-120%, ukusebenza kahle okuphezulu ne-cavitation ephansi. Ngaphezu kwalokho, i-kaiquan ingaqoqa abeluleki abango-20 eqenjini, abeluleki abangama-260 abangochwepheshe bokuhlinzekwa ngamanzi kanye namabhizinisi angama-600 abambisanayo, futhi inikeze izixazululo eziguqukayo zokonga ugesi zezinkampani ezihlinzeka ngamanzi ngokuya ngezinzuzo zayo ezinamandla zemithombo.
2. I-inthanethi yamahhala + yegumbi lokupompa ukufinyelela okuhlakaniphile kwesikhulumi sefu
Ngokuya ngezidingo zoNgqongqoshe wezeziNdlu nokuthuthukiswa kwamadolobha nezindawo zasemakhaya, indlu yesibili eyimpompo izofakwa kancane kancane ngaphansi kokuphathwa okuhlangene kanye nokwakhiwa okuhlangene, futhi ukuphathwa kwendlu yempompo kube yiphuzu elinzima. Mayelana nalokhu, i-kaiquan ibeka phambili ukufinyelela kwamahhala kungxenyekazi yamafu ehlakaniphile, neminye imikhiqizo yabakhiqizi nayo ingafinyelelwa ngokwenziwa ngcono (izindleko azikho ngaphezu kwe-3,000 yuan / set).
IKaiquan kungekudala izokwethula ipompo ehlakaniphile nemishini yokuhambisa amanzi ehlakaniphile, ngaphezu kwemisebenzi yendabuko yokuqapha ividiyo nokusebenza kwedatha, uhlelo lungeze ukufaniswa kwendawo efanelekile, isexwayiso samaphutha, imisebenzi yokuphathwa kwemijikelezo yempilo ephelele.
3. Kumahhala ukuthola amanzi ompompi ukuhlinzeka isixazululo sokulungiswa kwegumbi lamapayipi lamanzi lesibili ledolobha
Ngemuva kweminyaka engaphezu kwengu-20 yesipiliyoni ekwakhiweni, ekwenziweni, ekuthengisweni, ekusebenzeni nasekugcinweni kwemishini yokuphakela amanzi, i-kaiquan inezinto ezahlukahlukene zokuhambisa amanzi ezifana nohlobo lwebhokisi olungenayo ingcindezi engemihle, uhlobo lwethangi alukho ingcindezi engemihle, ukuguqulwa okugcwele kwemvamisa okudijithali, Njll Lapha i-kaiquan inikeza ukubonisana kwamahhala kwezobuchwepheshe emnyangweni wezamanzi odinga izwe, iqhuba uphenyo lwamahhala ngesimo segumbi lokuqala lokupompa amanzi, futhi isebenza nomnyango wamanzi ukuxazulula izinkinga nobunzima obukhona egumbini elidala lokuphompa umphakathi.